ပါချုပ်ဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာနိုင်သည်ဟု နိမိတ်မကောင်းကြုံတဲ့အခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်များ…
ပါချုပ်ဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာနိုင်သည်ဟု နိမိတ်မကောင်းကြုံတဲ့အခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်များ… ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာတဲ့အခါ ဘာနဲ့ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာတဲ့အခါဖြစ်လာမယ့်အရိပ်အရောင် ရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဘာနဲ့ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင် ဘုရားကိုအာရုံပြုပြီး ဗုဒ္ဓါနုဿတိကိုပွားရမယ် …။ ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကို အာရုံပြု၊ ကမ္မဌာန်းထိုင်၊ ဂုဏ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီး အချိန်များများ …မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရမယ် …။ လုပ်ပြီးတဲ့အခါကိုယ်လုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ သတ္တဝါတွေ၊ ကိုယ့်အနီးအပါးမှာရှိတဲ့ အိမ်စောင့်နတ်တွေကို အမျှအတန်း ပေးဝေရမယ် …။ အဲဒီ အမျှအတန်း ပေးဝေခြင်းအားဖြင့်… ကိုယ်နဲ့ သူတို့နဲ့က မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ ရလာတယ် …။ မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအန္တရာယ် မရောက်အောင်သူတို့က ကြည့်ရှုပေးတယ်။ ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ (Ph.D) ဟောကြား ရေးသားတော်မူသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး တရားတော်မှ ကူးယူပူဇော်ပါတယ် …
ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် စကားလုံးတွေကို သုံးပြီး သူမရဲ့ ချာတိတ်ကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ
ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် စကားလုံးတွေကို သုံးပြီး သူမရဲ့ ချာတိတ်ကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ် … ။ မယ်လိုဒီကတော့ သားလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော် … ။ မယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ သားလေးကိုအချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ပေမယ့် သားလေးပျော်အောင်တော့ထားပေးနေတဲ့မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် … ။ မယ်လိုဒီရဲ့ချစ်ခင်ပွန်းကလည်း ဇနီးသည်ကိုနားလည်မှုအပြည့်ပေးပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် … ။ လတ်တလောမှာဆိုရင်တော့ မယ်လိုဒီက ရင်ခုန်စရာအရေးအသားလေးတွေရေးသားပြီး သူမရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ရေးသားမျှဝေနေတာဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။ မယ်လိုဒီကတော့ အမြဲတမ်း အနုအရွ စကားလေးတွေကို သူမရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ တင်ပေးလေ့ရှိတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် … ။ ဒီနေ့မှာလည်း သူမနဲ့ …
နောက်တခါ အအေးဗူး၊ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ…
နောက်တခါ အအေးဗူး၊ဘီယာဗူး တွေဖောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကိုမဖြစ်မနေသတိထားပါ… အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းသင့်အနေနဲ့ မဖြစ်မနေသိထားသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ အင်တာနက်သုံးနေရင်းနဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်သတင်း တွေ့ဖူးကြမှာပါ …။ ဘယ်လိုမျိုးတွေလည်းဆိုတော့ မိသားစု အကုန်လုံး soda ဘူးဖောက်သောက်ရင်းအဆိပ်သင့်သလိုဖြစ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းလိုမျိုးပေါ့ …။ ဒါပေမယ့် အခုပြောပြချင်တာက တကယ်သေနိုင်လား?မသေနိုင်ဘူးလား?မသေဘူးဆိုရင်ကောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လည်း? ဘယ်လိုရှောင်ကျဉ်သင့်သလည်း?ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ် …။ တစ်ခုလောက်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားဖြေကြတာပေါ့။အိမ်ကနေအဝေးရောက်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သံဘူးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အအေးတွေ၊ဆိုဒါတွေ၊ဘီယာဘူးတွေကိုသောက်တဲ့အခါမှာ ဒီအတိုင်းဖောက်ပြီးတော့ သံဘူးနဲ့ဘဲသောက်ဖြစ်ကြပါသလား? မဖောက်သောက်ခင်တုန်းက မသန့်ရှင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီး မျက်နှာပြင် တဝိုက်ကို Tissue နဲ့သုတ်မိကြပါသလား?အဲ့လောက်နဲ့သန့်ရှင်းသွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါသလား? ကဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် အဖြေတွေကိုအောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် …။ သံဘူး တွေအကုန်လုံးကို စက်ရုံ ကနေထုတ်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ပိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြား ဖုန်တွေ အညစ်အကြေးတွေမတက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် …။ အဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းဘဲ …
ချစ်သူနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းခြင်းကနေ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ….
ချစ်သူနဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းခြင်းကနေ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ…. ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပေးတဲ့ အနမ်းတစ်ပွင့်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကြီးမားလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေး ချင်ပါတယ်။ ချစ်ရသူ အချင်းချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နမ်းတာဟာ အဲ့ဒီလူ နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship ကို ခိုင်မြဲ စေရုံ တင်မဟုတ်ပဲ တခြားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေ လည်း အများကြီးရရှိစေနိုင်ပါတယ် …။ သုသေတီပညာရှင် တွေ ပြောတဲ့ နမ်းခြင်းဖြင့်ရလာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို တော့ brightside.me မှာ အခုလို ဖော်ပြ ထားပါတယ်နော်…. (1) ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းစေတယ် နမ်းခြင်းက ၀ိတ်ကျစေတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား..? နမ်းတာဟာ ကယ်လိုရီတွေကိုပါ လောင် …
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် မြန်မာမှာ မတွေ့သေးတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ (၂)ခု နှင့် အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းများ…
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် မြန်မာမှာ မတွေ့သေးတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေ (၂)ခု နှင့် အကောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းများ… ဝူဟန်က ဗိုင်းရပ်စ် ကိစ္စပါပဲ …။ ရေးသားသူ – သက္ကမိုးညို (၁) ဝန်ကြီးကတော့ လုပ်ထားတာ လာကြည့်ရင် ဖျားသွားမယ်ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝူဟန်က လေယာဉ်ကြီး ဆိုက်လာတယ်။ လေဆိပ်မှာ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာနဲ့ ပေးဖြတ်ပြီး အားလုံးအောင်တော့ ခွင့်ပေးလိုက်တယ် …။ ဂိုက်လိုင်းအတိုင်း လုပ်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ရောဂါဝင်ရောက်ပြီး လက္ခဏာ မပြသေးတဲ့ (ရောဂါပျိုးချိန်)မှာ လွတ်သွားရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ အခု CNN သတင်း အရ လက္ခဏာ မပြသေးလဲ ကူးစက်နိုင်တယ် လို့ဆိုပါတယ် …။ ဝူဟန်ခရီးသွားတွေ …
ကောင်လေးတွေရဲ့ အချစ်တွေကိုပိုကဲပြီးရနိုင်မယ့် မိန်းကလေးတို့ရဲ့အပြုအမူလေးများ…
ကောင်လေးတွေရဲ့ အချစ်တွေကိုပိုကဲပြီးရနိုင်မယ့် မိန်းကလေးတို့ရဲ့အပြုအမူလေးများ… ယောကျာ်းလေးတွေမှာ သူတို့ချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရမ်းသဘောကျရတဲ့အချက်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ရုပ်ရည်ချောမောလှပတာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိတာတွေထက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ … (၁) သူပြောတဲ့ဟာသတွေကို ရယ်မောတာလေး သူပြောတဲ့ဟာသလေးတွေကို စိတ်ပါလက်ပါရယ်မောတတ်တဲ့အပြုအမူလေးကို ယောကျာ်းလေးတွေက အရမ်းကိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ ဟာသဉာဏ်ရှိပြီး သူတို့ပြောတာကိုအလေးထားတဲ့အပြုအမူလို့ သူတို့တွေယူဆကြပါတယ် …။ (၂) သူ့ရဲ့ဆံပင်တွေကို ဆော့ကစားတာမျိုး ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့ဦးခေါင်းကိုကိုင်တာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ချစ်သူက ဆံပင်လေးတွေကိုဆော့ကစားတာမျိုးကိုတော့ သိပ်သဘောကျတတ်ပါတယ်။ ဒါက ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့ ကြင်နာမှုကို ခံစားရလို့ပါတဲ့ …။ (၃) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပေမယ့်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရှက်နေတာလေး နဂိုပုံစံက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပေမယ့် သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရှက်နေတာမျိုး၊ မဝံ့မရဲဖြစ်နေတာမျိုးက သူ့အမြင်မှာ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းနေတတ်ပါတယ် …
This Year : 147136
Total Users : 442269
Total views : 1700709